မလဲစကောင်း လဲစကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မလဲစကောင်း လဲစကောင်း
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 20, 2010 in Drama, Essays.. |2comments
အောင်မောင်းတို. ရွှေလီတံတားကိုကျော်လိုက်တာနဲ. ၀င်ဝင်ခြင်း စတွေ.တာက နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုံတရုပ်ဘက်က ရုံးပါဘဲ။
ခမ်းနားခန်.ထည်တဲ.ခဲရောင်အဆောက်အဦထဲကနေ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ.ယူနီဖောင်းနဲ.လူတွေကလဲ မျက်နှာပေးမာမာ ခပ်ထည်ထည်ပုံစံလေးတွေနဲ.ပါ။
ကျနော်ရောက်စနေ.က မနက်စောစောမဒီရုံးအ၀င်က လမ်းမအလယ်ခေါင်မှာ တရုပ်မကြီးတစ်ယောက်က ခါးထောက်ရပ်နေတာ ဘာများပါလဲ
ဂေါက်နေသလားထင်မိတာ သူက ၀င်လာမဲ.ကားကိုစောင်.ပေးနေတဲ.သူပါ။
သည်ကားဝင်းထဲမှာတော. ၀င်လာတဲ.ကောက်ပဲသီးနှံကားတွေ မြန်မာပြည်ကလာတာလေ။
ထွက်သွားမယ်.ကားတွေက မြန်မာထဲကိုဝင်မှာပါ အများအားဖြင်.ဆိုင်ကယ်တွေကားအစီးလိုက်တွေ.ရပါတယ်။
လူတစ်ရပ်လောက်ရှိတဲ.ပင်စည်အပိုင်းအစတွေရယ် အတော်များများကို ဟိုနားနည်းနည်း ဒီနားနည်းနည်း
လမ်းဘေးမှာပုံထားတာတွေ.တော. ဘယ်သူကများမြန်မာပြည်မှာခေတ်စားနေတဲ. အင်စတော်လေးရှင်းလုပ်ထားလဲလို.မေးလိုက်တော.ပါလာတဲ.သူက
အောင်မောင်းထင်ဆိုအဲဒါတွေနဲ.မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဆိုင်အ၀င်ဝ နံရံမှာ ကနေတဲ.ဒေါင်းရုပ်မောင်နှံပုံကို သစ်ထွင်းပန်းပုထုလို.ချိ်တ်ထားတဲ.အပြင်
ထုလက်စ သစ်သားပန်းပုပင်စည်အပိုင်းတွေ ထုပြီးသားဘုရားပုံတော်တွေ တရုပ်အန်းကုန်းရုပ်တွေတင်မကဘဲ
သူ.ဆိုင်ဘေးမှာလဲ ပင်စည်တစ်ပိုင်းပြတ်သစ်ပင်တွေ ဘွန်ဇိုင်းအပင်ပုလေးတွေကိုတွေ.နေရလို.ပါ။
သူကနည်းနည်းလွန်တော. သစ်မြစ်ဆုံရဲ.ဘေးနားမှာနံကပ် အိမ်တန်းလေးခပ်စုတ်စုတ်မှာ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်လေးရယ်ဘာလုပ်မှန်းမသိတဲ.မိသားတစ်စုရယ်တွေ.ရပြီးသူ.ဘေးမှာတော. နန်းတော်ပုံစံလိုခေါင်မိုးနဲ.ခြံဝင်းလေးကိုတွေ.ရပါတယ်။
သည်လမ်းရဲ.အလယ်ခေါင်မှာ ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးကို သစ်ပင်တွေက၀ိုင်းလို.စက်ဝိုင်းမကျတစ်ကျ ပုံဖော်ပြီးသစ်ပင်မျိုးစုံကိုစိုက်ထားတဲ.
သည်ဘက်မှာတော. အနောက်တည်.တည်.ကို ဆင်းမဲ.လမ်းအကွေ.လေးပါ။
သည်အကွေ.ထိပ်မှာ အရှည်မျောမျောလေး လုပ်ထားတဲ.သစ်ပင်တွေအပြည်.စိုက်ထားပြီးလမ်းလယ်ကျွန်းလုပ်ထားပါတယ်။
သည်သစ်ပင်တွေနဲ.လမ်းလယ်ကျွန်းက အသွားလမ်းအပြန်လမ်းကို ခြားပေးထားပါတယ်။
သည်သစ်ပင်အပြည်.နဲ.လမ်းလေးတွေက ဟိုအနောက်ဘက် လမ်းအဆုံးထိ တစ်ပြန်.တစ်ပြောကြီးရှိနေတာပါ။
သည်ကျွန်းလေးတွေထဲမှာ ညောင်ပင် အတော်ကြီးကြီး ပိန္နဲပင်အတော်ကြီးကြီးတွေအပြင်အပင်ပေါင်းစုံတွေ ကျောက်တုံးကြီးတွေ
သည်အ၀င်လမ်းမှာ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အစပ်ကစလို.လမ်းတစ်ဘက်တစ်ချက် မှာ နေရာနည်းနည်းချင်းချဲလို.သစ်ပင်တွေစိုက်ထားပါတယ်။
တစ်ချို.အပင်တွေက စိမ်းစိမ်းစို စို တစ်ချု.ိက ခြောက်ကပ်ကပ် ဘာကြောင်.လဲမသိ သစ်ပင်ကို အ၀တ်နက်တွေပါတ်ထားပါတယ်။
ဒါကလဲလမ်းတလျှောက်လုံး မှာ ကျွင်းလေးတွေတူးထားတာရောတူးလက်စတွေရောတွေ.ရပါတယ်။
အောင်းမောင်းက “ဒီလိုသစ်ပင်တွေကိုစိုက်ထားတာကျက်သရေလဲရှိ ရာသီဥတုအတွက်လဲကောင်းသိပ်ကိုအကြံကောင်းတဲ.လူတွေဘဲ”
စုစုပေါင်း ခြောက်ယောက် အလုပ်က ကလေးတွေအပါအ၀င်ပေါ.။
ဆိုင်ကလေးကို သူ.အထက်က တောင်ကြီးတစ်တောင်က လူတွေဘယ်လောက်များလာစားသလဲလို.ငုံ.ကြည်.လို.နေပါတယ်။
ငါးအစိမ်းကို အသီးအရွက်တွေနဲ.ပေါင်းလို.ဟင်းရည်အချိုချက်ကို မြေအင်တုံနဲ.ထည်.လို. အငွေ.တထောင်းထောင်းပေါ.။
နောက်မြေအင်တုံတစ်လုံး ထဲမှာတော.ငါးကိုကြော်လို. ခုနကလို အသီးအရွက်တွေနဲ.ပဲသူကတော.ချဉ်စပ် သူကလဲ အငွေတထောင်းထောင်းပါဘဲ။
ငါးကဘယ်လောက်ကြီးသလဲမမေးနဲ.သူ.ဆီကရတဲ. အကြေးခွံတွေကို ကျွတ်ရွနေအောင်အမြည်းကျော်ပေးထားတာကိုက ပန်ကန်းပြားတစ်ချပ်အပြည်.။
နောက်ကျန်တဲ.ဟင်းတွေကတော. သိပ်ထူးမခြားနားပါ သည်မှာလဲစားလို.ရနေတဲ. ခရုဆီနဲ.ကိုက်လန်တို.။
ကြက်အကြွတ်ကြော်တို. ကြက်ခြေထောက်သုတ်တို. အော်စွန်းသုတ်တို. ချိုချဉ်ကြော်တို.ပါ။
ငါးအစိမ်းကိုချက်တာက ချိုမြမြ ငါးကြော်ကိုချက်တာကတော.အချဉ်လေးနည်းနည်းကဲစပ်ရှားရှား ။
စားပြီးရှင်းတော. တရုပ်ငွေ 300 မြန်မာငွေဆိုရင် 45000လောက်ပေါ.ဗျာ။
နောက်စားပြီးမှမှားသွားတာ တစ်ခုက အခြားတစ်ဖက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိချင်စိတ်က လူကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားစေတာပါ။
အားလုံးစားပြီး ခြံအနောက်ထဲကို အသွား အုဉ်ရေကန်တွေကို မြင်လို.သွားအကြည်. စောစောက ကျနော်အားရပါးရတီးခဲ.တဲ.ငါးတွေက
သည်ကန်ထဲမှာမွေးထားပြီး ချက်ခါနီးမှ ခုတ်ထစ်ပြီးချက်တာပါတဲ.ဗျာ။
မြင်သားကြားသားကိုမစားတဲ.မြန်မာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဆိုတော. ၀င်ပြီးသလောက်တောင်ပြန်ထွက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားပါတယ်။
ထမင်းစားပြီးတော. ရွှေလီညကို ကားနဲ.ပါတ်ကြည်.ပါတယ်။
လမ်းမပေါ်ကိုမိုးထားတဲ.သံကိုင်းအခုံးတွေက နီယွန်မီးယောင်တွေက ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် ဖွင်.ထားတဲ.ဆိုင်တွေက မီးရောင်စုံကတွေကလဲ တလက်လက်
ဘေးနှစ်ဖက်ကလဲ ဆိုင်အပြည်. လူတွေကလဲ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ဆိုင်က၀န်ထမ်းလေးတွေကလဲ ၀င်လာသူကို နှတ်ဆက်ဘို. အဆင်.သင်.ပေါ..
တစ်နေရာအရောက်မှာတော. မီးလင်းနေတဲ.အခန်းလေးထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ လှတပတ ကလေးမလေးတွေထိုင်နေတဲ.ကောင်မလေးတွေကို မြင်တော.ဘာလဲလို.စူးစမ်းမိတော.
“မီးအိမ်နီတန်း”ပါတဲ.ခင်ဗျာ ဆက်ပြီး စပ်စုလိုက်တော. အ ရန်ကောဆိုတဲ.အကြည်.လေးတစ်ချက်ကိုပေးလိုက်တဲ.အဖြေကတော. အစိုးရက တရားဝင်ခွင်.ပြုထားတဲ.
ပြည်.တန်ဆာအိမ်များ ပါတဲ.ခင်ဗျား ဆက်တော.မမေးရဲတော.ပါဘူး တော်ကြာသွားချင်တယ်ထင်လို.ပို.နေရင် အောင်မောင်းတစ်ယောက်အ နေခက်မှာစိုးလို.ပါဗျာ။
ဒါနဲ.ဘဲ ဘာမှမ၀ယ်ဘဲ မြို.ကို တပါတ် တိုင်းခန်းလှည်.ပြီးပြန်လာကြပါတယ်။
နောက်ရက်တွေကြတော. မနက်ပိုင်းအုလပ်စီစဉ်ပေးပြီးရင်အောင်မောင်းတစ်ယောက် ဘက်ထရီဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ. လူတတ်ကြီးလုပ်လို.မြို.ကိုပါတ်ပါတယ်။
ဘိုက်ဆာတယ်ဆိုရင် တစ်ခါပြင်ဆိုင်လေးတွေ ချပြထားတဲ.ဟင်းတွေကို လက်ညိုးထိုးပြလို.သူတို.ထည်.ပေးတဲ.တိုင်းယူရင် တရုပ်ငွေ ငါးကျပ်။
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ဘာသာကိုထည်.ရင် သူတို.ပြောသလောက်ပေးပေါ.။
အောင်မောင်းတစ်ယောက် ဟင်းတွေထမင်းတွေတစ်ပုံကြီးထည်.လို.ကြက်ကြော်တစ်ပေါင်နဲ.စားတာတောင် 12ကျပ်ဆိုတော. မြန်မာငွေ 1600လောက်ကျပ်တယ်။
ဒီဆိုင်မှာ ဟင်းရည်နဲ.ရေနွေးကတော. ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ကြိုက်သလောက်ယူ စားပြီးထားခဲ. သူဖာသာသူလာသိမ်းသွားပါတယ်။
ဒီဆိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတဲ.အောင်မောင်းရဲ.အမှတ်အသားကတော. ဆိုင်ဖက်ကိုမရောက်ခင်ကွေ.မှာ ဆေးရုံတံတားလို.ခေါ်တဲ.တံတားလေးရှိပါတယ် ဒီနားကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ.ကြည်.လိုက် အိုးတွေတန်းစီချထားတဲ တစ်ခါပြင်ဆိုင်တွေကို တွေ.ရပါတော.တယ်။ဒီဆိုင်က နေ.မဖွင်.ပါဘူး
အမိုးခုံးကြီးအောက်ကနေ အထဲဝင်တယ်ဆိုတာနဲ. မြန်မာစကား နဲ.ပြောလို.ရ မြန်မာနာမယ်တွေပေးထားတဲ. မီးခိုးတွေတလုံးလုံးနဲ.ထမင်းဆိုင်တွေကိုတွေ.ရမှာပါ။
ဈေးကတော. သက်သာတယ်မပြောနိုင်ပေမဲ. ဈေးကြီးတယ်လဲပြောမရပါ ဟင်းတစ်ပွဲ 15ကျပ် ကြက်ကြော်တစ်ပွဲ 30 ထမင်းတစ်ထုပ်တစ်ကျပ် ကြိုက်တာစား
ဒီဆိုင်မှာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတာကတော. ခဏခဏလာပြီး ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ. ဘီယာသည်မမတွေရယ် ဇွတ်ကိုယ်နားမလယ်တဲ.စကားနဲ.လာတောင်းလို.မထည်.လိုက်နဲ.
တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထပ်ကာထပ်ခါလာ တဲ.အသက်ကြီးနေတဲ.သူတောင်းစားတွေပါ။
ဒီမှာလဲ သူတောင်းစားရှိတာဘဲ ငါတို.နိုင်ငံနဲ.အတူတူဘဲလို. အောင်မောင်းတစ်ယောက် သွေးနားထင်ရောက်သွားပါသေးတယ်။
ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ.နိုင်ငံနဲ. တူတယ်ဆိုတာ လဲ ဂုဏ်ယူစရာဘဲနော်။
ကုန်တိုက်မရောက်ခင် လမ်းဘေးကဆိုင်မှာ သားရေအိတ်တစ်လုံး အိမ်က လေဒီအတွက် မြင်လို.မေးတော. 70 တဲ. တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ.ဆစ်လိုက်တာ 45ကျပ်နဲ.တည်.တော.ထည်.လိုက်ပေါ. ချစ်ချစ်အတွက်အိမ်ပြန်လက်ဆောင်။
လမ်းပေါ်က ကြည်.လိုက်ရင် ဖန်အိမ်လုံးလုံးပုံဓါတ်လှေကားကြီးက လူအပြည်.နဲ.ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ပါ.။
သီချင်းသံတွေအောက်က ကြားလို.ငုံ.ကြည်.လိုက်တော. အသက်ငယ်ငယ်ကြီးကြီး ကျားရော မရောသီးချင်းစည်းချက်အလိုက်ကလို.ကျန်းမာရေး
လုပ်နေကြတာကို မြင်ရတာ ညီညီညာညာနဲ.လှမှလှ သည်လိုကဘို. အလကားတော.ရမယ်မထင် ကြေးပေးပြီးမှဝင်ကရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဆိုင်ခန်းတွေအများကြီး အထပ်အမြင်.ကြီးကို နည်းနည်းပါးပါးလှည်.ပါတ်ကြည်.ပြီး မ၀ယ်ဘဲပြန်ထွက်လာပါတယ်။
မ၀ယ်ဆို ကပ်ထားတဲ.ဈေးတွေက ရှယ်ကိုးဗျ။
အောင်မောင်းကိုင်မကြည်.လိုက်နဲ. ပါလာတဲ.ကလေးတွေက ” လေးလေးနောက်မှဝယ်မယ် “လိူ.၀မ်နိမ်ပေးနေတာကိုးဗျ။
ဒါနဲ.နောက်တစ်လမ်းကိုဝင်ပြီးကုန်တိုက်အသေးလေးထဲကို ၀င်မှ “လေးလေး လိုချင်တာကြည်.”လို.ကလေးတွေကပြောပါတယ်။
ဂွမ်းစောင်လေးတထည် 55ကျပ် တန်တယ် ၀ယ် ကြက်ပေါင်ဖိနပ်တရံ 3ကျပ်ခွဲ ထည်.လိုက် နောက်နည်းနည်းကောင်းတာ 13ကျပ် ထပ်ထဲ.
မိန်းမစီးလေးက 6ကျပ် တန်မှတန် ၀ယ်တယ်ဗျာ။
ဒါနဲ.ဘဲ အောင်မောင်းလက်ထဲမှာ အထုပ်တွေတစ်ပွေ.တစ်ပိုက် ငွေကလဲ 100ကျော်ကျော်လောက်ခုန်ထွက်သွားပါတယ်။\_
ကလေးတွေက အောင်မောင်းကို နက်ဖြန်ကျရင် တစ်ဆယ်ဆိုင်နဲ.နှစ်ကျပ်ဆိုင်လိုက်ပို.မယ်လို.ပြောပါတယ်။
တစ်ဆယ်ဆိုင်ဆိုတာ ဆိုင်ထဲမှာခင်းထားတာ ဘာယူ ယူ တစ်ဆယ် နှစ်ကျပ်ဆိုင်ကလဲ ဘာယူယူနှစ်ကျပ်လို.ပြောတာပါ။
၀င်ကြည်.လိုက်တော.တစ်ဆယ်ဆိုင်မှာစတီးအိုးစတီးခွက် ဖန်ခွက် အိတ်မျိုးစုံ နာရီ နေကာမျက်မှန် စားပွဲခင်းတွေ ချုပ်ပြီးသား အိပ်ယာခင်းတွေ
ဆပ်ပြာမူန်.တွေ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ လျပ်စစ်နဲ.တယ်တဲ.ရေးနွေးအိုး(ဒါပေမဲ.ကြိုးတပ်မထားဘူးး ပေးလဲမပေးဘူး)
ဘတ်စကက်ဘောဘော.လုံး ကြက်တောင်ရက်ကက် ဘုရားရုပ်ထု ပိုက်ဆံအိပ်အကြီးအသေး ကလေးကစားစရာ တွေ ခါးပါတ်တွေ
ဆံပင်ကောက်တဲ.ဖြောင်.တဲ.အပူချောင်း ဆံပင်အခြောက်ခံစက် မုတ်ဆိတ်မွေးရိတ်စက် လျပ်စစ်နဲ.သုံးတာတွေကလဲပက်ကင်တောင်မဖောက်ရသေးဘူး။
အောင်မောင်းသားရေယိုနေတာကိုမြင်တော. ကလေးတွေက “လေးလေး လျှပ်စစ်နဲ.သုံးတာဆိုရင်ရှောင် ကုန်ဆုံးရက်နဲ.သုံးရတာကိုရှောင်ကျန်တာ ကြိုက်တယ်ဝယ်
လူတစ်ယောက်ကတော.ပစ္စည်းတွေအပုံလိုက် ၀ယ်တာတွေ.လို.မေးတော. ဘာဝယ်ဝယ်အခု100ပြည်.ရင် တစ်ခု8ကျပ်နဲ.ပေးတော.
ဒါတွေကိုဝယ် မြန်မာပြည်ကို သယ်လို.ပြန်ရောင်းတဲ.သူတွေအတွက် ဂွင်အသစ်ပါတဲ.။
မန်းလေးမှာတုံးက သည်ကိုမလာခင်တစ်ပါတ်လောက်ပေါ. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တိုက်ရိုက်သယ်သူနဲ.တွေ.လို. တန်တယ် နှစ်ထောင်ဆိုလို.
၀ယ်ထားလိုက်တဲ .ခုအောင်မောင်း လက်မှာပါတ်ထားတဲ.နာရီလေးကို သူအကိုက လှမ်းနှတ်ဆက်နေတာကို ခုမှမြင်မိပါတယ်။
နောက်လှည်.ပါတ်ကြည်.လိုက်တော.ဘိနပ်ပုံအကြီးကြီးထဲမှာ မနေ.က ကုန်တိုက်ထဲမှာ 3ကျပ် တို. 6ကျပ်တို.နဲ.၀ယ်လို.ရတဲ. ဘိနပ်လေးတွေက ကျနော်ကို ရီပြနေသလို
နံရံချိတ်ထားတဲ. အိတ်တွေထဲက အိတ်တစ်လုံးက ပြုံးပြနေတယ်ထင်လို.ကြည်.လိုက်တော. မနေ.က ကျနော် ခက်ခက်ခဲခဲဆစ်လို.လေးဆယ်ပေးဝယ်ခဲ.တဲ.အိတ်ကလေးရဲ.အမွှာညီမလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ.တောမှ ကလေးတွေဝမ်နိန်ပေးတာကို သတိရမိပါတယ်။
ကလေးတွေကလေးလေး တန်တယ်ဆိုစွတ်မ၀ယ်နဲ. အပြန်ကျလေးလေးအသယ်ခက်မယ်လို.သတိပေးမှ ၀ယ်တာကို ဘရိတ်အုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ.လဲ ဒါလေးက ဟိုလူ.ပေးဘို. ဒါလေးကကျ သူအတွက်မြင်တိုင်းအားပေးလိုက်တာ 200ဘိုးလောက်ပါ။
မှန်ပါ.ဗျာ သက်ငယ်စကား သက်ကြီးနားထောင်ရတဲ.ခေတ်ပါဘဲ။
ဘောင်းဘီအတို 19 အရှည်28 စပို.ရှပ်မိန်းမ၀တ်ယောက်ကျားဝတ် အစားစားပါ ။
ကပ်ရက်ဆိုင်က အကျီလေးလှလို.၀င်မေးကြည်.ပါတယ် 60တဲ. အောင်မောင်းက မော.အကြည်. ကောင်မလေးက ပြောပါတယ်
“ဒီဘက်က ဈေးပေါတာမရောင်းဘူး” တဲ.မြန်မာလို.ပီပီသသလေးပါဗျာ။
နောက်တော.ကလေးတွေကလဲ ဘောင်းဘီတွေရွေးကြ ဆစ်ကြနဲ. အထည်တော်တော်များများကို ၀ယ်ဖြစ်တော.
19ကျပ်တန်က 17ကျပ် 28ကျပ်တန်က 26နဲ.ရပါတယ်။
သည်မှာတော. ဓါတ်ခဲ ကဒ်လေးတွေ ခြေအိပ်တွေ လက်အိပ် စာအုပ် အရုပ် သော.ချိတ်ပိုက်ဆံအိတ်အသေး
ယားရင်ကုတ်တဲ.တုတ် အောက်ခံဘောင်းဘီကျားမ အပေါစားလေးတွေ တစ်ဆိုင်လုံးကိုစုံနေတာပါဘဲ။
ကလေးတွေဝယ်နေတုန်းအောင်မောင်းက အနွေးထည်ဆိုင်ကို ၀င်ပြီးကြည်.မိပါတယ်။
အောက် က သားမွေးခံတာက 500 ရိုးရိုး လိုင်နင်ခံတာက 150တဲ. ရိုးရိုးတစ်ထည်အောင်မောင်းကြိုက်လို.မေးတော. 120နဲ.ပေးမယ်တဲ.
သည်.ပြင်အရောင်ရှိသေးလား ဆိုက်ကရော ဒိတစ်မျိုးထဲဘဲလားလို.မြန်မာလိုထပ်မေးတော.မဖြေဘူး။
၀တ်ကြည်.တော.သေးနေတယ် ဒါနဲ.အောင်မောင်းလှည်.ထွက်လိုက်မှ နောက်ထဲက ပြောလိုက်တာ “သူကြိုက်တာ ရှာပေးလိုက်တာတော.မဟုတ်ဘူး “ပါတဲ.။
ကလေးတွေကပျောက်လို.လိုက်ရှာတော. အောင်မောင်းကို ဆိုင်ထဲကထွက်လာတာတွေ.ရော လေးလေး လာဆိုပြီးဟိုဘက်လမ်းကို ခေါ်ပြီးဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တယ်
အောင်မောင်းကြိုက်တာလေး တန်းတွေးတော.၀တ်ကြည်.တယ် တော်တယ် ဘယ်လောက်လဲလို.မေးတော. 70 တကယ်ပေးလိုက်ပါတယ် 55နဲ.ပါ။
မန်းလေး မှာ လမ်းစည်းကမ်းမဲ.တာ ရွှေလီက ရီပါတယ်။
မီးနီ လူရှင်းတယ်ထင်ရင်ဖြတ်တယ် လမ်းပြောင်းပြန်ဆော်တာဘဲ အကွေ.ဟိုဘက်လမ်းကနေ သည်ဘက်လမ်းဖြတ်ကွေ.တယ်
အငှားကားလူတားတာနဲ.လမ်းလယ်ကောင်ရပ်တင်တယ် မီးပွိုင်.ဆင်းမလားတက်မလားရတယ် ။
တစ်ညနေ ကျနော်တို.လမ်းလျှောက်လို. တံတားဘက်ကိုထွက်လာပါတယ်။
ကားတွေပေါ်မှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေတင်လာတာကိုမြင်လိုက်တော. သစ်ပင်တွေဖြစ်နေပါတယ်။
သစ်ပင် အစိုအရှင်တွေကို အမြစ်ကနေနုတ်ယူလာတဲ.အပြင် သည်အပင်ရဲ.ဘေးမှာကလဲ မြေကြီးအခဲတွေကလဲပါလာပါသေးတယ်။
ခဏနေတော.ကရိန်းအသေးလေးလာပြီးသည် သစ်ပင်ကို တူးထားတဲ.မြေတွင်းထဲကိုချလို.စိုက်ပါတယ်။
ခုမှသိလိုက်ရတာက သူတို.က အပင်တွေကို ငယ်ကတည်းကစိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ သူများ မွေးထားတာကို အပင်လိုက်နုတ်ပြီးလာစိုက်တာကိုပါဘဲ။
သည်အပင်တွေဘယ်ကလာသလဲ ပုံထားတဲ.အမြစ်ဆုံတွေဘယ်က စုံလာသလဲ ဟီးထနေတဲ.သစ်ကွင်းကြီးဘယ်ဆီကဆင်းလာသလဲဆိုတာကို
ဒါကြောင်.ရောက်စတုန်းက ဘာမှမသိဘဲလျှောက်ပြောတော. အသံတိတ်အကြည်.နဲ.အကစ်ခံရတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။
သူတို.က ကျနော်.တို.လိုတဲ.ငွေကိုပေးပြီးကျနော်တို.ရဲ.ရာသီဥတုကို သူတို.ဘက်ဆွဲရွှေ.နေတာပါ။
ကျနော်တို.က ကုန်ကြမ်းတွေ သယံဇာတတွေကို ရောင်းပေးတယ်။
သူတို.ကုန်ချောကိုကျနော်တို.က ၀ယ်တယ် ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်တန်နေတာပါဘဲ ။
ကျနော်တို.ဆီမှာဘာဝယ်ဝယ် အငယ်ဆုံးက ရာဂဏန်းဖြစ်နေတာကိုးဗျ။
သည်မှာကျတော. တစ်ကျပ်ထဲကျပ် တစ်ပြားထဲပြားနေတော. ငွေလဲနှန်းကိုမစဉ်းစား ကြားသမျှတန်တယ်ထင်လို. ၀ယ်ဖြစ်နေတာပါဘဲ။
မစဉ်းစားဘဲ လဲနေတော.လဲ ခံ လို.ပြောရုံကအပြင်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးနော်.။
ပြည်တော်ပြန်တဲ.နေ.ကျမှရွှေလီတံတားကို အဖြတ်အောက်ငုံ.ကြည်.လိုက်မိမှ ရေမရှိတဲ.ရွှေလီကို မြင်လိုက်ရပါတော.တယ်။
သည်လိုနေရာတောင်ရေမရှိဘူးဆိုမှတော. ကျနော်တို.နိုင်ငံလိုအပူပိုင်းဒေသ အင်တာနက်မှာ ရေလှူကြပါအော်နေတာ ဘယ်ဆန်းမလဲဗျာ။
ဒါနဲ.ပဲ အထွက်ဂိတ်အရောက် အပေါက် ၀က တရုပ်မကို အထွက်လက်မှတ်ပြလို. တံဆိပ်လဲထုပြီးလို. အပြင်ဘက်လဲရောက်ရော
“ငေါ ဝေ ကြား လော် ” လို.တရုပ်လိုအားရပါးရအော်လို.ရွှေလီကို နုတ်ဆက်ခဲ.ပါတယ်။
အင်း..ဟုတ်မှာပဲ….မေလဆန်းပိုင်းလောက်ကတောင်…လူ ၃..၄..၅ ယောက်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့ အမြစ်ပါတဲ့ အပင်ကြီးတွေ ကားတစ်စီးကို တစ်ပင်နှုန်းနဲ့… အစီး (၂၀)ကျော်လောက် တက်သွားတာ တွေ့လိုက်တယ်… ဒါတောင်…ကိုယ်မမြင်လိုက်တဲ့ ရှေ့မှာ ကားတွေ ဘယ်နှစ်စီးလောက်ရှိမှန်းမသိ….
အင်း ကြာရင်တော့ နူရာဝဲစွဲ ပြီး လဲရာသူခိုးထောင်းဖြစ်တော့မှာပါပဲ ။
မတိုးတက်ရတဲ့အထဲ ၇ာသီဥတုကပါဝင်ပြီးထောင်းလိုက်လို့ ကတော့ ……..
အို ဘာတဲ့ သခင်မျိူးပော့ဒို့ ဗမာ …….. နည်းနည်းမှတော့မလျှော့နိုင်ဘူး